Norway: Weerar loo adeegsaday hub nooc cusub ah oo dad badan lagu dilay caawa + Sawirro | Dalkaan.com
Home Warkii Norway: Weerar loo adeegsaday hub nooc cusub ah oo dad badan lagu...
Norway: Weerar loo adeegsaday hub nooc cusub ah oo dad badan lagu dilay caawa + Sawirro
Oslo (Caasimada Online) – Nin ku hubeysan qaanso iyo fallaan ayaa shan qof ku dilay, laba kalena ku dhaawacay weeraro dhowr ah oo habeenkii Arbacada ka dhacay magaalada Kongsberg ee dalka Norway, sida ay sheegeen booliska.
Ninka lagu tuhmayo weerarka ayaa la qabtay, sida ay sheegeen booliska.
“Ninka wuxuu weerarada qaar u adeegsaday qaanso iyo fallaar,” waxaa sidaas weriyayaasha u sheegay Oeyvind Aas oo ah madaxa booliska Kongsberg. Booliska ayaa sidoo kale baaraya haddii hub kale loo adeegsaday weerarka.
“Ninka waa la xiray…akhbaaraadka aan illaa hadda hayno, qofka wuxuu ficilladan fuliyey keligiis,” ayuu yiri Aas.
Dadka la dhaawacay ayaa waxaa ka mid ah sarkaal boolis ah oo aan xilligaas shaqo ku jirin.
Dhimashadan ayaa ah tii ugu badneyd ee ka dhalata weerar ka dhaca Norway tan iyo 2011, markaasi oo xagjir midig-fog ah Anders Behring Breivik uu dilay 77 qof oo badankood ahaa dhallinyaro ku jiray xiro.
Weerarka Arbacada ayaa ka dhacay meelo kala duwan oo ka mid ah Kongsberg, oo ah magaalo ay ku nool yihiin 28,000 oo koonfur bari 68 km ka xigta magaalada caasimadda ah ee Oslo.
Dowladda ayaa sheegtay in booliska ay billaabeen baaritaan baaxad weyn.
“Warbixinada ka imanaya Kongsberg caawa waa kuwa argagax leh,” waxaa sidaas tiri ra’iisul wasaare Erna Solberg, oo intaas ku dartay in xaaladda ay hadda gacanta ku hayaan booliska, shacabkuna isdejiyaan.
Taliyaha booliska Aas ayaa sheegay inay baarayaan haddii weerarkan uu yahay ficil argagixiso iyo in kale.
Previous articleKulamada Todobaadka Dambe Ee Premier League iyo 16 Xidig ee ka Maqan
Next articleTaabid oo warbixin ka soo saaray xuska 14-ka October
Wasiir ABGAAL oo soo rogay amar cidii fulin weysa lagu calaameynayo...
Garowe (Caasimada Online) – Wasiirka Maaliyadda Puntland Xasan Shire Abgaal ayaa amar culus dul-dhigay maamullada iskuullada ka howlgala deegaanada maamulkaas, iyadoo laga dalbaday inay...
Daawo: Xasan Sheekh oo ka hadlay guusha laga gaaray kiiskii badda
Muxuu noqon karaa go’aanka ICJ, kadib tallaabadii KENYA?
Afar nin oo Soomaali walaalo ah oo dhacdo naxdin leh ku...
Taalibaan oo dalab xasaasi ah u gudbisay Mareykanka
Juventus oo diyaarineysa heshiis ay ku dooneyso xiddiga Manchester United Paul...
Daawo: Ugaaska Cayr oo si lala yaabay uga noqday baaqiisii nabadda...
dalkaan_2ujpzr - October 5, 2021 0